.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash ဆိုဒ်အသစ် ၆
Flash ဆိုဒ်အသစ် ၆
ဒီနေ့တော့ သူငယ်ချင်းတို့အတွက် ဖလက်ပုံလှလှလေးတွေရနိူင်တဲ့ ဆိုက်လေးပြောပြပေးမယ်နော်။
အရင်ကတင်ပေးဖူးတဲ့ ဆိုက်မျိုးပဲ ဒါပေမယ့် ခုဟာကမူရင်းဆိုက်ထင်ပါတယ်။ တစ်ရုတ်လိုတွေတော့ရေးထားတယ်။
နားမလည်ပေမယ့် ပုံလေးတွေကအရင်တင်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ဆိုက်ထက်ပိုစုံပါတယ်။ ပုံလေးတွေလဲလှတယ်။
အားလုံးပဲ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ။ ဒီပိုစ့်လေးကိုပြန်လည်မျှဝေရင်creditလေးထည့်ပေးနော်။
Posted by FlashSongCrazy at 09:24
Labels: Effect, Flash, Website